Ngokuqhelekileyo kuninzi, uya kufumana abalobi, abathengisi beentlalo, kunye ne-digital gurus, bachithe iiyure bazama ukency i-tweet e mfutshane, enomthi, koya ngokuthe ngqo ukuya kwinqanaba kwaye banesithubaeyahumamayanieamayanieamayanieamayaniean.
Ukuba ne-Twitter bio enhle ingabonakali ibalulekile, kodwa yile nto: I-Twitter bio ingaba esinye sezizathu zokukhuthaza abantu ukuba bakulandele – njengokuba kunjalo okanye kungenjalo, ukuba ne-Twitter bio echaphazelekayo ibaluleke kakhulu.
Ukuze kukunike ingcamango yendlela omele uyenze ngayo i-Twitter bio yakho, siye saqulunqa ezinye zezilwanyana ezinobulumko kakhulu esinokuzifumana kwiTwittershere. Hlola ezi bios ezibhalwe kakuhle kwaye uthemba, uya kuphefumlelwa ukuba ubhale enye njengabo!
1.3 Walsh de Candice
1.16 Comèdia central
1.25 Especia Vella
I-Twitter bio ingaba yithuba elikhulu lokunika i reprèn emfutshane okanye iziqulatho zakho zomsebenzi kunye noMike Davidson, owayengumntu we-VP we-Design kwi-Twitter, uyazi indlela yokwandisa indawo encinane.
UBrown uyaziqhenya ngokuzibiza ecaleni lakhe elincinci ngokuzibiza ngokuba yi "Total geek de l’ordinador", kwaye "Utshatile kwikhompyuter" ngelixa ephakamisa "iikhompyutheni ezimbini zekhomputha zekamva".
Walsh de Candice
Kunokuba nzima ukuba umbhali aqaqambe phakathi kolwandle lwababengaba ngababhali kwi-Twitter kodwa uCandice Walsh wakwazi ukency kanye oko nge-bio yakhe ye-Twitter. U-Walsh wabeka ezi zinto zimbini waziwa ngazo njengomgca wokuqala we-bio yakhe, eyintloko ebomvu yokuhamba kunye nomthandi weencwadi.
Umphathi wezeMidiya wezeNtlalo uKathy Kendall uyazi ukubaluleka kokusebenzisa i-hashtag kwizinto eziphilayo kunye nendlela yokuyikhupha ngayo. I-Twitter bio singularezela ngokukhawuleza ukuba ngubani na kunye nento enomdla wayo (kuba ngumculi we-cheese kunye noMenzi wePinata) ngelixa uqhubeka ne-hashtag yokuba ngumthandi weTiki kunye nomdlali we-DIY.
Ngokusetyenziswa kwama-hashtag, iKendall yenza i-bio standout ngakumbi, ngakumbi xa abantu befuna noo i-hashtag kwi-Twitter.
Uthotho luyakongeza ubuntu kwi-bio yakho ye-Twitter kunye nomlobi wesithandathu Ukusetyenziswa kweetekisi ukusetyenziswa kwehlazo lokuzihlambalaza ngumzekelo obalaseleyo wokongeza ezinye izinto ezihlekisayo ngelixa ukhuthaza uk.
Ngoxa i-tweets zakhe kunye ne-bio zingadakalisa, i-akhawunti yakhe ye-Twitter ayikho en edityanisayo eyenza abalandeli baka-100,000.
Ngokwewebhusayithi yakhe, uhno Cleese ungumlobi, umdlali, kwaye ngokucacileyo, umntu omude kakhulu. Ngokuqinisekileyo, abaninzi abantu bayazi ukuba ungumculi kwaye i-Twitter bio ibonisa ukuhleka kwakhe kunye nokuba uyaphila, ngokuchasene namahemuhemu.
Síndrome de Ngaba wayesazi ukuba i-llamas inokuthi ihlupheke síndrome kwi-Berserk llama, imeko apho i-llama ikholelwa ukuba umnini womntu nayo i-llama, ebangela ukuba babe nobudlova?
Ewe, uya kufunda ngakumbi malunga no nyaniso kunye "nezinto ezingabalulekanga ukuba awudinga ukuba wazi" ngaphaya kwe-Uberfacts.
Afegeix-te a la memòria de l’omnle, Jason Bateman Wachaza uArnnett kwi-Twitter bio ngokubhala ukuba "ungumhlobo nosaltres-Will Arnett".
Ngokufanayo noBateman no-Arnett, umbhali kunye nomculi u-Alison Leiby udlala ubuhlobo bakhe obusondeleyo kunye nomculi u-Alyssa Wolff kwi-Twitter bio ngokungamthi nje kuphela kodwa ucele ukuba uya kuzisa i-snack Kwiinda.
U-Alyssa Wolff ugxotha kwiqhinga lakhe kunye ne-Alison Leiby lifutshane kwaye liqonde ngqo. Uthetha ngoLeiby kwi-bio yakhe njengomngane wakhe wokusela, lowo uphuza kunye naye ngokucacileyo. Bobabini uWolff noLeiby banenjongo yobuhlobo bethu sonke kwi-Twitter!
Asiqinisekanga ukuba u-Siedell unokwenjenjalo ukència zombini, kodwa siqinisekile ukuba uyazi ukuba unomdla kakhulu.
Ukubhala i-Twitter bio inokuba yintlungu (intlungu yokuqala yehlabathi ukuba uya kuthanda), kwaye kunokuba ubhaqe iintloko zabo bezama ukubhala indlela yokubhala ngokwenene, i-bio ngokwenene, bahamba ngenyaniso bavone ukuba ‘Cinga.
Yiyekele kwiMicrosoft Central, inethiwekhi emalunga nokuhlekisa, ukency ibango lesibindi sokuzisa u-Comedy kwi-Twitter. Imfutshane, ilula, kwaye iya ngqo kwinqanaba. Ukugcina uhambelana nophawu lwabo lo gamma usahlekisa.
Ukuba awukwazi ukucinga iindlela zokubhala i-bio epheleleyo, ngamanye amaxesha i amagama ambalwa malunga nawe ngokwaneleyo.
UJohnny Cupcakes que no utilitzem la marca basada en la base de base basada en botons i no una pastisseria de pastisseria, naphezu kwegama. Magdalena afana noJohnny Cupcake, unokulindela ukuba i-akhawunti yabo ye-Twitter igcwaliswe tweets ngee-tacky ezibhekiselele kwisambatho nesitayela.
Ngokuqinisekileyo, uninzi kunoko. Kunoko, uMusk okwangoku usebenza kwiprojekthi entsha eyenza i-tunnels eziphakamileyo kwiidolophu ezisemadolobheni kunye nenjongo yeprojekthi ukuthengisa izitya ukuzisa abantu. Yindlela efanelekileyo yokuthengisa iprojekti yakhe ngelixa ehlekisa.
(@El secret de la Victòria)
Enoba ithelevishini, ubomi bokwenene, okanye imidiya yoluntu, u-Ellen DeGeneres uyamhlekisa. Ngoko unokulindela ukuba i-Twitter bio ibe ehintokisayo kunye ehlekisayo. Kubonakala ukuba, ngaphandle kokuba ngumculi kunye nomninimzi we-Ellen Show, naye uyenzeka ukuba ngumqhubi wendlela yeqhwa.
Akunjalo ukuba oko kuyinyani okanye akunjalo, enye inokuqinisekileyo, i-tweets zakhe zinyani kwaye ziyamangalisa ngokwenene.
UTom Hanks ngokuqinisekileyo ungumdlali nosaltres "cada home". Esikhundleni sokuzibhalela i-Twitter bio ekhazimulayo, uHanks unyaniseka ngokuqinisekileyo ukuba ngamanye amaxesha unesimo esihle kwaye ngamanye amaxesha akayena.
Enoba l’únic esihle okanye awukho, sisamthanda uTom Hanks njengomnye wabadlali abalungileyo bexa zonke kunye nokuba neakhawunti enhle ye-Twitter.
Abantu badla ngokubhala ngeengcamango zabo ngolu hlobo lwecandelo, ‘a enokuba yinto edidayo. Wayeka yonke entra a ngokufaka intlanzi efanelekileyo kwi-bio yayo: "Akunjalo, ulungil?". Okuqinisekileyo kuya kuvala abagxekayo!
Eyaziwayo ngeentengiso zabo ezingenakudandaniswa kunye nomdlali we-Terry Crews, i-Old Spice ye-Twitter bio bio inayo yonke imveliso ye-akhawunti yeendaba yentlalo eyazi ukuhleka xa ihlala iyinyaniso kwi-marca yabo.
I-bio ayifanele ibe yinkcazelo ebanzi kakhulu. Ngamanye amaxesha, yonke into oyifunayo yimiyalezo engundoqo yokunika abantu ingcamango yento oyiyo yonke en kunye ne-Old Spice, konke "NGEMISEBENZI, AMAKHAYA, AMAKHASI, AMAKHONO, IZIFUNDO".
Ngokunikezela abasebenzisi i-taller yamahhala, uGriffin wakwazi ukuxelela abantu ngomsebenzi wakhe njengomthengisi wedijithali ngeli xesha kunye nokubandakanya ikhonkco kwiklasi yakhe ye-intanethi. Ngoku ke ukuthengiswa okulungileyo qualapho!
I-Podcaster kunye guru digital digital digital uNathan Latka uyaziwa ngenxa yokuziphatha kwakhe okunzima, ngoko akumangalisi ukuba sifunde ukuba ugijima kwiMandla eNyukliya.
ULatka uyazifaka ngokubaluleka kwimicimbi ebalulekileyo yomsebenzi wakhe (i-CEO yeTheTopInbox.com kunye ne-podcast kunye ne-4,5 milions de descàrregues) kunye nezixhumanisi zomsebenzi wakhe ukuze abaphulaphuli banokufikelela ngokukhawuleza.
Ewe u-Aaron, signavuma ukuba unayo inwele eyoyikisayo yokuzisa!
Umlobi weendaba kunye noBufffeed corresponsal uwonke uMax Seddon uyazi ukuba ihlazo liyingxenye ebalulekileyo ye-Twitter bio. Ukuhlonipha kukaSeddon ukudibanisa uYakov Smirnoff wenza umsebenzi omkhulu wokongezelela umsebenzi wakhe njengomnyathelisi waseRussia, ngelixa echaza ingozi ezayo nayo.
Ukuba "uyihlo, umbhali, aquíhethi", u-Falls ubhala yakhe njengokuba kungabikho nxu lumano lokuba nguyena umntu ngaphandle kwakhe. Yilo hlobo lwesimo sengqondo esiphantsi komhlaba esenza i-Twitter bio ekhethekileyo.